5 Ciyaaraha Waxbarashada Jirka iyo Waxqabadyada Dugsiga Sare | Ragga Stylish
Markay ardaydu ku jiraan dugsiga sare, waxaa muhiim ah in la siiyo waxbarasho jireed oo wanaagsan. Sidaa darteed, in kasta oo ahmiyadda waxbarashada jimicsiga badanaa la dhayalsado, waxay fure u tahay koritaanka jirka. Waxaa jira ciyaaro badan oo jimicsi ah oo dugsiga sare ah iyo waxqabadyo door muhiim ah ka ciyaara labadaba aqoonsashada iyo dib u habeynta xiriirka ka dhexeeya maskaxda iyo jirka shucuurta qaan-gaarka.
Si tan loo sameeyo, waxaan u gogol xaaraynaa qodobkan inaan ku baro 5 ciyaaraha jimicsiga iyo waxqabadyada dugsiga sare.
1 Muhiimadda ciyaaraha iyo waxqabadyada dhalinyarada
2 5 ciyaaraha jimicsiga ee dugsiga sare
2.1 Ka gudub aagga kulul
2.2 Kubadda cagta-teniska
2.4 Aan cayaarno
2.5 Dagaalka safka
Muhiimadda ciyaaraha iyo waxqabadyada dhalinyarada
Markuu qofka dhallinta ahi horumarayo, wuxuu ku kasbadaa waaya-aragnimo iyo aqoon cusub hawlo iyo shucuur kala duwan. Hawlahani waxay abuuraan wada shaqeyn iyo xiriir ka dhexeeya jirka, maskaxda iyo shucuurta. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaa caawinaysaa kobcinta kaqeybgalka bulshada iyo kobcinta saaxiibtinimada.
Maskaxda ku hay in muuqaalka jireed maahan oo kaliya in loola dhaqmo sidii wax bilic leh. Waxqabadka isboorti wuxuu boos ku leeyahay caafimaadka dadka. Haddii dhalinyaradan yar ay caado ka dhigtaan jimicsi joogto ah, waxay aakhirka la xiriiri doonaan in badan nolol caafimaad leh. Ha iloobin in, sida caadiga ah, jimicsiga joogtada ah ee jimicsiga jirka uu xiriir la leeyahay ku darista cunto caafimaad leh.
Sababahan oo dhan awgood, waxaa muhiim ah inay jiraan waxqabadyo jimicsi jimicsi iyo ciyaaro dugsiga sare ah oo baari kara dhalinyarada si ay si hufan ugu horumaraan. Waana in ardayda dugsiga sare ay la kulmaan isbeddello jireed iyo maskaxeed oo waaweyn oo mararka qaarkood aysan xakamayn karin xawaaraha ay ku dhacayaan awgood. Isbedeladan jireed iyo maskaxeed waxay u taagan yihiin caqabad weyn nidaamka waxbarashada oo dhan.
Ku-biirinta horumarka lama huraanka ah ee qaan-gaarka marka la eego waxbarashada jir-dhiska ayaa asal ahaan ku saleysnaa hagidda kicinta dhammaan matoorada, garashada iyo cunsuriyada bulshada. Taasi waa, carruurta oo keliya ma awoodi doonaan inay horumariyaan awoodaha jireed, laakiin sidoo kale waxay awood u yeelan doonaan inay xiriir la yeeshaan qaan-gaarka kale ayna abuuraan khibrado cusub. Meelahan shaqada waxaa loo sameeyay si loo oggolaado horumarin dhammaystiran oo dheellitiran ee qaangaarka. Tani waa sida qaangaarka uu u xaglin karo dastuurka aqoonsigiisa.
Isla mar ahaantaana, waa in maskaxda lagu hayaa in dhaqdhaqaaqyadan iyo ciyaaruhu ay sidoo kale siin karaan fursad shaqsigu u helo helitaanka aqoon ku filan oo u adeegta si waafaqsan dhaqanka iyo damiirka bulshada iyo caafimaadka. Iyada oo ku saleysan tan iyo waayo-aragnimada la soo helay, waxaad go'aansan kartaa inaad ku noolaato nolol caafimaad leh iyo in kale.
Kuwani 5 ciyaarood ee jimicsiga iyo jimicsiga dugsiga sare waxay ku saleysan yihiin dhammaan mabaadi'da kor ku xusan ee aan soo sheegnay oo aan ku faahfaahinnay maqaalka. Sidan oo kale, maahan oo keliya in madadaalada ardayda la gaaro, laakiin dhammaan faa'iidooyinka ku taxan ayaa sidoo kale la gaarey.
Waxaan soo taxi doonnaa 5ta waxqabad ee jimicsiga jimicsiga iyo ciyaaraha loogu talagalay dugsiga sare oo aan faahfaahin ka bixin doonno.
Ka gudub aagga kulul
Ciyaartani waxay ka kooban tahay dhaqdhaqaaq tartan. Debo wuxuu kubilaabmayaa iyadoo ardayga la dhigo khadka dhexe ee garoonka ciyaarta. Isla waqtiga uu cunuggu ku jiro booskan, inta kale ee ay isku fasalka yihiin waxaa la geyn doonaa koox koox dhamaadka cirifka. Macallinka ayaa markaa bilaabi doona tirinta cod dheer 10 ilaa 1. Kahor intaan tirintu gaarin xadka ardayda oo dhami waa inay aadaan dhinaca kale ee maxkamada iyadoo aaysan taaban lamaanahooda khadka dhexe.
Sharciga lagama maarmaanka u ah ciyaartan ayaa ah in lammaanaha khadka dhexe uu mar walba xiriir la leeyahay khadka. Ciyaarta waxaa ku guuleystey ardayga oo aan la taaban karin inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa. Marka ciyaaryahan uu taabto midka ku yaal bartamaha garoonka, isaguna wuxuu ku biirayaa safka. Cayaartu way dhamaan doontaa marka uu haro hal qof oo kaliya oo awood u yeeshay inuu dhaafo taabasho la'aan.
Ciyaartan waxaa lagama maarmaan ah in la helo maxkamad ama goob xariiqyo xadidan leh. Waxaa loo baahan yahay in la helo shabag iyaga kala soocaya iyo kubbad caag ah oo leh soo-kabasho wanaagsan. Ciyaarta waxaa lagu ciyaaraa iyadoo shakhsiyaadka oo dhan loo kala qaybiyo laba kooxood. Kooxahan ayaa ah kuwa masuulka ka ah kubbadda shabaqa ku dhaaf si ciyaartoyda ka soo horjeedaa aysan u soo laaban karin.
Sharciga ugu muhiimsan ee ciyaarta ayaa ah in kubbada kaliya lagu taabto cagaha, muruqyada ama madaxa. Lama taaban karo duruuf kasta ama gacmaha. Intaas waxaa sii dheer, kaliya 3 kabood ayaa loo oggol yahay goob kasta iyadoon kubaddu dhulka taaban. Mar kasta oo koox ay ku guul darreysato isu soo baxa, kuwa ka soo horjeedaa waxay helayaan ujeeddada iyo xaqa ay u leeyihiin inay u adeegaan. Cayaartu waxay socotaa 3 jeer illaa midkiiba 15 dhibcood.
Cayaartani waxay diiradda saareysaa xawaaraha iyo dhaqaaqa shaqsiga. Tan awgeed, 10 ama in ka badan dhejiska waa in lagu dhejiyaa xariiq masaafaddiisu tahay midkiiba midkiiba. Laga bilaabo bilowga hore ilaa boostada ugu horreysa waa lagama maarmaan in waxaa jira ugu yaraan 3 mitir oo masaafo ah si qofku u aqbali karo xawaaraha. Markuu yeeridu yeerto, arday walba waa inuu sameeyaa safar wareeg ah isagoon tuurin wax fariin ah haddii kale isku dayga waxaa loo qaadan doonaa mid aan waxba ka jirin. Ardayga isdiiwaangaliya waqti kayar ayaa guuleysan doona.
Ciyaartan waxay ka kooban tahay wareeg 5 xarumood oo ay ardaydu ku dhammaystiri karto mid kasta oo ka mid ah. Saldhig kastaa wuxuu leeyahay qoob-ka-ciyaarka aerobic-ka oo saameyn hooseeya iyo dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq ah oo lagu sameeyo gudaha 3-daqiiqo oo u dhexeysa.
Fasalka waxaa loo qaybin doonaa dhowr kooxood wuxuuna mari doonaa saldhigyada wareegga iyadoo la dhameystirayo waxqabad kasta. Ujeeddada hawshani waa in laga shaqeeyo isku duwidda, laxanka iyo in ardayda la siiyo wakhtiyo xiiso leh.
Ugu dambeyntiina, kulankaan waxaa lagu ciyaaraa iyadoo loo kala qaadayo fasalka laba qaybood. Koox kasta saf ayaa la sameeyaa kaas oo si adag loogu qaban doono garbaha dhexdooda. Ujeeddadu waa in la ilaaliyo midnimada markasta. Dayax waliba wuxuu ku riixi doonaa dhinaca jirkiisa kan ka soo horjeeda safka kale. Cayaartu waxay dhammaataa marka isku xigxiga uu ugu dhow yahay meeshii laga bilaabay.
Waxaan rajaynayaa in ciyaartan iyo waxqabadyada PE ee dugsiga sare ay kaa caawin karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » 5 ciyaaraha jimicsiga ee dugsiga sare